သခင်အောင်ဆန်း . . .ပြန်လာစမ်းပါ. . . | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သခင်အောင်ဆန်း . . .ပြန်လာစမ်းပါ. . .
သခင်အောင်ဆန်း . . .ပြန်လာစမ်းပါ. . .
Posted by alinsett on Feb 13, 2015 in Creative Writing, Critic, History, My Dear Diary, Poetry | 11 comments
:cry: အလင်းဆက် ပြောချင်တဲ့စကား
သခင်အောင်ဆန်းလို “လူ” မျိုးတွေပဲ ထပ်လိုချင်တယ်
မမဇီ= ဟုတ်တယ်နော် သူ့ကို အားနာမိတာရော မျက်နှာပူမိတာတွေရေ. . .
မိခင်ကောင်း သားစွမ်းရည်တွေရော လိုတော့ လိုနေတယ်နော်
သူရဲကောင်းဆိုတာ လိုသလောက်မရတော့လည်း ခက်သား
ဒီကဗျာလေးက ကဗျာပြခန်းအမှတ် (၅) မှာ ပြခဲ့ပြီးသား ကဗျာလေးပါ။
အခု အမှတ်တရ ပြန် ဆွဲထုတ်လာမိတာပါခင်ဗျ
.ဦးမိုက်မန့်ထားတဲ့စာကလဲ…. အလက်ဆင်းပြောသလို ထိပါတယ်…..။
သခင်​​အောင်​ဆန်းက ပြန်​လာလို့ မရ​တော့ဘူးကွယ့်​ ။ ​မောင်​ရင်​မသိ​သေးရင်​​ပြောရအုံးမယ်​ ။ ဘာလို့လဲဆို​တော့ သခင်​​အောင်​ဆန်းကို ပြည်​၀င်​ခွင့်​ဗီဇာ ထုတ်​မ​ပေးလို့​လေ သိဘူးလား ဘလက်​လစ်​စ်​​တောင်​သွင်းထားပလားမသိဘူး
တိုင်းပြည်​အတွက်​ တခါ​သေ​ပေးတာနဲ့တင်​ ​ကျေးဇူးတင်​ဖို့​ကောင်းလှပါပြီ
ပြန်​လာရင်​ ဖြစ်​ပျက်​​နေတာ​တွေကြည့်​ပြီး အခါအခါ ​သေချင်​သွားမှာစိုးလို့ပါ
သခင်​​အောင်​ဆန်းအ​ကြောင်း မျိုးဆက်​တခုစီ လက်​ဆင့်​ကမ်းပီး သခင်​​အောင်​ဆန်း​ပေါက်​စ​လေး​တွေ
သားကောင်းဖခင်ဖြစ်ဖို့.. ကျနော်လည်း ကြိုးစားမယ်…
ဟောဒီမှာ သူကြီးမင်း ရေ
သခင် တဲ့။ ခေါ်နေကြတယ်။